थप ‘यो पनि पढ्नुहोस् – श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने ! आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित ले खेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरूयी सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको परिवारमा कहिले पनि झगडा हुदैन।
Previous मुसा वा छु,चुन्द्रा ले टोक्दा यस्तो हुन्छ
Next ८ दीन पछि भेटीयो सेतिमा टीकटक बनाउदा खसेकी पवित्राको श,व ! यस्तो अबस्थामा पानिमा तैरीरहेपछि….